Madaxweyne Farmaajo oo Goor dhow dib ugu soo laabtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Farmaajo oo Goor dhow dib ugu soo laabtay Muqdisho
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Dhuusamareeb uga qeyb galay Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaasi oo natiijo la’aan kusoo dhammaaday, kadib markii heshiis laga gaari waayay doorashada dalka.
Masdaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan shir deg deg ah isugu yeeray Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka oo lagu waday inuu dhacdo 5-tii bishaan Febraayo, hayeeshee dib u dhac ayaa ku yimid.
Maanta oo sbati ah ayaa lagu wadaa in Madaxweynaha uu hortego Xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka, isagoo u jeedin doona khudbad uu uga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka dhacaya.
Xildhibaanada ayaa waxaa goorsii horeysay loo diray fariimo ku aadan in Maanta uu jiro kulan gaar ah, isla markaana looga baahan yahay inay kasoo qeyb galaan, waxaana ka horyimid Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Dhinaca kale Senataro ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay inay ka qeyb geli doonaan kulankaas oo saacadaha soo socda ka furmi doona Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho.
Dowladda Somalia oo dalbatay in waqtiga loo kordhiyo Howgalka AMISOM